KUCHITHWE umfundisi Mlamli Ningiza kwiMbewu: The Seed, obedlala indawo kaPastor Ndamase kulo mdlalo, kukhalwa ngokuthi uhlulwa wuphuzo oludakayo. Isithombe: FACEBOOK/ MLAMLI NDAMASE
THOKOZANI NDLOVU | February 18, 2020
KUCHITHWE umfundisi emdlalweni we-e.tv iMbewu: The Seed, uMlamli Ningiza kukhalwa ngokuthi uhlulwa wuphuzo oludakayo, agcine engasezi nasemsebenzini ukuzoshutha iziqephu zakhe.
UMlamli, obedlala indawo kaPastor Ndamase kwiMbewu: The Seed, uphinde abe nguMfundisi webandla iChosen Missionary Church.
Ngokuthola kweSolezwe ngeSonto ngomthombo walo ongaphakathi kulo mdlalo, kuzanywe konke ukusiza uMlamli enkingeni yophuzo kodwa kunhlanga zimuka nomoya.
“Bese kuze kwashintshwa nombhalo wakhe kwiMbewu: The Seed, esebhalelwe iziqephu ezizomveza njengomfundisi odakwayo ukuze kugqibeke ihlazo lakhe lokuthi uhlulwa wutshwala kodwa kube sengathi usuke enzela ukuyoshutha emdlalweni.
Nakhona ubevele angafiki ukuzoshutha iziqephu, angatholakali nasocingweni. Uma kwenzekile wafika, ubefika ejuluke emanzi, enuka utshwala ebukeka njengomuntu ongalalanga ophuze kwaze kwasa,” kusho umthombo.
Omunye umthombo uveze ukuthi uMlamli uqophe umlando ngoJanuwari ngesikhathi kuvulwa kwiMbewu: The Seed engatholakali.
“Washayelwa ucingo kwiMbewu, ucingo lwakhe lwabanjwa wumuntu osebenza endaweni edayisa utshwala. Wathi uMlamli uhambe edakwe kakhulu kule ndawo izolo, waze washiya neselula yakhe. Uthe esetholakala ocingweni abeMbewu bamtshela ukuthi umsebenzi usuphelile, ayikho into abangayenza ngoba isihluleke yonke imizamo yabo. Kwaba wukuchithwa kwakhe kulo mdlalo,” kusho umthombo.
Okhulumela Imbewu: The Seed, uMaketseng Mokome, uthe abangeni empilweni yangasese yabalingisi.
“Ngeke ngikuqinisekise ukuthi uMlamli usekhona noma akasekho yini kwiMbewu: The Seed ngoba imibhalo yabalingisi iyashintshashintsha njalo.
Njengamanje sisezinhlelweni zokwethula abalingisi abasha kodwa asikakaziphothuli njengoba singakafinyeleli esinqumeni sokuthi bazongena kanjani emdlalweni.
Kungenzeka ukuthi uMlamli ungomunye wabalingisi abahamba babuye emdlalweni kodwa anginalwazi lokuthi uhlulwa wuphuzo oludakayo,” kusho uMaketseng.
UMlamli ubengaqali ukulingisa ngeMbewu: The Seed, uke waba ngomunye wabalingisi bomdlalo weshashalazi iHow Long kaGibson Kente ngesikhathi uvuswa kabusha wuDuma kaNdlovu nyakenye. Lo mdlalo ubukhonjiswa ePlayhouse.
Ethintwa uNingiza uthe ngamampunge ukuthi uxoshiwe, wathi akanayo inkinga yotshwala.
" Angikwazi ukuphawula kwabezindaba ngingayitholanga imvume kwabeMbewu. Ngizoke ngibathinte ngibazise ngalamahemuhemu. Ngicela ubuye ungithinte ngoMsombuluko, sengikhulumile nabo. Ngokwazi kwami ngisayingxenye yawo umdlalo," kusho uNingiza.